Ọtụtụ Uru Mmanụ Almọnd Maka Ntutu - Ntutu Isi
Mara otutu ele mmanu almond di na ntutu
Know Many Benefits Almond Oil
Almọnd bụ ezigbo nri dị ịtụnanya na ọtụtụ uru ọ bara maka ahụike, anụ ahụ na ntutu. Almọnd belata kọlestrọl, belata ihe ize ndụ kansa, na-enyere aka izere ọrịa obi, na-achịkwa shuga dị n’ọbara, ma na-enyere aka ịchịkwa ibu. Maka anụ ahụ kwa, ọ nwere ọtụtụ elele dị ka mmụcha anụahụ, iwepụ tan, na-emeso nnukwu ọrịa anụ ahụ dị ka psoriasis na eczema, ọ bụkwa ọgwụgwọ maka egbugbere ọnụ egbugbu, wrinkles, ikiri ụkwụ gbajiri agbaji, ụkwụ na aka Ọ na - enyere aka izu ike mgbe ejiri ịhịa aka. Ọbụna maka ntutu, uru ya dị ọtụtụ ma anyị lelee etu mmanụ almọnd siri dị oke mkpa maka ahụike, ntutu mara mma.
Almọnd bụ ike nke nri. Mkpụrụ almọnd jupụtara na Vitamin E, abụba ndị nwere ike ịgbakwunye, protein, potassium na zinc, ma e wezụga ọtụtụ mineral na vitamin ndị ọzọ. Ọ na-abịa n’ụdị abụọ dị iche iche - ihe ilu ma dịkwa ụtọ. Na mmanụ almọnd ụtọ a na-ejikarị eme ihe maka ahụike na ebumnuche mara mma dịka mmanụ almọnd na-adịghị ewe iwe ọ bụ ezie na enwere ike iji ya mee ihe. Almọnd bụ ụmụ amaala nke India, Middle East, na North Africa mpaghara, ma bụrụ akụkụ nke ọtụtụ usoro ọgwụgwọ ọdịnala maka ọtụtụ afọ.
Mmanụ ahụ dị ọkụ ma na-esi ísì ụtọ na-eme ka ọ bụrụ ihe na-adọrọ adọrọ karị iji mee ihe, ebe ọ bụ na ọ nweghị isi ọjọọ ma ọ bụ nke nnyapade nke ga-arụ ọrụ dị ka ihe mgbochi iji mee ihe. Ọ bụ otu n'ime ndị akacha eji mmanụ ntutu maka ọtụtụ, ọtụtụ ọgbọ na India, ma e wezụga mmanụ aki oyibo. Get nweta ọtụtụ ụdị na-enye almọnd mmanụ. Ikwesiri ijide n'aka na nke ị na-eji dị ọcha na ụdị na ọ nweghị ụdị ịkwa iko. Mmanụ almọnd na-ajụ oyi na-enweghị mgbakwunye ndị ọzọ ga-arụ ọrụ kacha mma.
1. Iji Na-emeso dandruff na mmebi ntutu
abụọ. Iji Lelee Ọrịa akpụkpọ ụkwụ na mbufụt
3. Iji Na-emeso Ọkpụkpụ Isi na Nkesa
Anọ. Maka Nro nro na-enwu gbaa
5. Maka Healthy na Ike ntutu
6. Zọ dị iche iche iji etinye
7. Mmanụ almọnd maka ụdị ntutu dị iche iche
8. Masks ntutu na-eji mmanụ almọnd
Iji Na-emeso dandruff na mmebi ntutu
Enwere ike ọtụtụ ihe kpatara dandruff. O nwere ike ịbụ nkụ nke anụ ahụ, anaghị ehicha ya nke ọma na mgbe niile, oke ncha ntutu, seborrhoea dermatitis, eczema, psoriasis psoriasis, allergy, ma ọ bụ a yist-dị ka ero. Ihe mkpofu dandruff na-emetụta ntutu ntutu dịkwa ka ọ na-agbakọ na ntutu isi na gburugburu mgbọrọgwụ ntutu ma ghara ikwe ka ikuku oxygen chọrọ ya rute. Mkpụrụ almọnd na-enyere aka na na-eme ka dandruff dị nro nke na-atọpụ njide ya na isi ya ma nwee ike ịsacha ya ngwa ngwa mgbe ị na-asa ntutu mgbe mmanụ gasịrị.
Ngwọta: Gwakọta mmanụ almọnd na tablespoon nke amla ntụ. Tinye ya na isi gị, na - ịhịa aka na ya. Hapụ ntutu gị otu awa tupu ịsa ya na ncha ntutu kwesịrị ekwesị.
Iji Lelee Ọrịa akpụkpọ ụkwụ na mbufụt
Mmetọ, okpomọkụ, uzuzu, na kemịkal na ngwaahịa ntutu nwere ike wulite na ntutu ma metụta ya site na-ebute mbufụt na ọrịa. Takingghara iji nlezianya zere ihe ndị a na - eduga ntutu na - adịghị ike, dandruff, wdg. Ihe mgbochi mkpali nke almọnd mmanụ dajụọ ma belata mbufụt.
Ngwọta: Tinye 1 ngaji nke mmanụ oliv na-amaghị nwoke na tablespoons abụọ nke mmanụ almọnd. Tinye 1 ngaji tii osisi dị mkpa na mmanụ a andụ 1 ngaji na ngwakọta. Gwakọta nke ọma ma tinye ya n'isi. Debe nke a maka ọkara elekere, tupu ị saa ya.
Iji Na-emeso Ọkpụkpụ Isi na Nkesa
Akpịrịmkpa n’akpịrịkpa na nkwonkwo dandruff nwere ike ibute ntutu isi. Ọtụtụ ihe ndị ọzọ dịka enweghị ezigbo nri, nkụ nke ntutu, wdg, ga-eduga na mmụba nke ntutu, yana kwa gbawara n'etiti . Ihe ntutu gị chọrọ bụ mmụba nke hydration, na mwepụ nke ọ bụla mbufụt na dandruff. Mkpụrụ almọnd na-enyere aka na nke ahụ. Ọ na - akwalite uto nke ntutu ma na - ebelata ntutu. Mkpụrụ almọnd nwere magnesium, calcium na zinc. Obere magnesium na calcium nwere ike ibute obere ntutu na n'ikpeazụ, ntutu isi. Enweghị zinc nwere ike iduga alopecia nke na-eduga na ntutu ntutu. Dị ka mmanụ almọnd nwere mineral ndị a, iji ya eme ihe mgbe nile zere ntutu isi .
Ngwọta: Gwakọta almọnd, castor na mmanụ oliv na nha anya. Hịa aka na ntutu a dị ntakịrị mmiri. Tinyegharịa nke a ugboro abụọ n'izu maka ọnwa ole na ole iji wepụ nkwụsị gbawara agbawa. Hịa aka n'isi gị na ntutu nwere mmanụ almọnd. Ghichaa akwa nhicha na mmiri ọkụ wee pịchaa mmiri karịrị na towel ahụ tupu ị kechie ya kpamkpam n'isi ya. Debe nke a ihe dị ka ọkara elekere ma ọ bụ karịa tupu ịsacha ya na ncha ntutu kwesịrị ekwesị.
Maka Nro nro na-enwu gbaa
Mmanụ almọnd na-enyere aka inye hydration ntutu dị gị mkpa nke na-enyere ha aka ịdị na-enwu gbaa, na-adịkwa nro. Mkpụrụ acid bara uru dị na mmanụ almọnd na-enyere aka ọ bụghị naanị moisturizing ahịa ala isi kamakwa ntutu na-eme onwe ha, si otú a na-eduga ntutu dị mma .
Ngwọta: Mash otu ube oyibo, ma tinye mmanụ almọnd na Mash. Gwakọta nke ọma ma tinye pasta a n'isi gị. Debe nke a maka nkeji iri anọ na ise tupu ịsacha ya na ncha ntutu.
Maka Healthy na Ike ntutu
Mmanụ almọnd nwere vitamin E n’ime ya nke bara ọgaranya n’ahụ́. Antioxidants na-egbochi nsogbu ndị na-enweghị nsogbu na-emetụta ahụike ntutu. Ọ na-enyere aka n'ịtụgharị mmebi nke ntutu kpatara ihe dị iche iche dịka mmetọ, kemikal, okpomọkụ, wdg.
Ngwọta: Were ụfọdụ hebal herbal ma gbanye ya na mmiri n'abalị. Gwakọta tablespoons 3 nke mmanụ almọnd na otu akwa na nke a n'ụtụtụ. Tinye dobe ma ọ bụ abụọ nke lavender mmanụ dị mkpa. Debe ihe agwakọta maka minit 10-15 tupu itinye ya na ntutu gị. Debe ya otu awa tupu ịsaa ya.
Zọ dị iche iche iji etinye
Enwere ike itinye mmanụ almọnd n'ụzọ dị iche iche na-enyere aka na enweta ahụ ike, mara mma ntutu . Otu ụzọ bụ iji ya post-asacha ka a na-ahapụ-na conditioner. Ihe ị chọrọ bụ itinye mmanụ ole na ole nke almọnd na ntutu gị ozugbo ọ kpọnwụrụ. Ọ na - enye ntutu gị ezi nchapụta ma na - eme akwa nke na - echebe ntutu site na ihe ndị na - emerụ ahụ dị ka mmetọ, uzuzu, wdg.
Maka idozi ngwa ngwa a, nke mbụ, ị ga-agbakọ ntutu isi gị iji kpuchie ya. Gbaa mbọ hụ na ntutu takọrọ ma ghara ide mmiri mgbe ị na-agba ya. Bido na ngwụcha ma jiri nwayọ gbagoo iji hụ na enweghị nrụgide na-enweghị isi na ntutu na-eduga na ntutu. Ozugbo ajị ntutu dị, were ihe na-erughị ọkara ngaji mmanụ almọnd n'ọbụ aka gị wee gụkọta aka gị ọnụ. Gbaa mkpịsị aka gị na ntutu gị na-eme ka mkpuchi mmanụ niile dị na ya. Don’tchọghị nnukwu mmanụ maka nke a. Ọ na-eweda ntutu isi na ya frizzy ntutu Ọzọkwa. Gbaa mbọ hụ na ị naghị emetụ mgbọrọgwụ ntutu gị aka mgbe ị na-etinye ihe ọzọ ntutu na-amalite ịmị mmanụ. I nwere ike ime nke a kwa ụbọchị ma ị chọọ.
Anotherzọ ọzọ bụ nke ịkọwapụta nke ọma ma mee tupu ị tinye ncha ntutu na ntutu gị. Ọ bụ ọgwụgwọ miri emi miri emi maka ntutu isi. Maka nke a, ịchọrọ ntutu isi mmiri, dịka mmiri mmiri na-enyere ntutu aka ịbanye mmanụ almọnd ka mma. Jiri mmiri ọkụ maka nke a na-asacha, ebe ọ bụ na mmiri ọkụ na-eme ka agbụ dị nro gị dị nro na-enyere aka ịtọpụ ya nke ọma. Ozugbo ị sara mmiri gị na mmiri ọkụ, jiri akwa mịrị amị jiri nwayọ ma zuru oke detangle ntutu . Ghichaa ya mgbe ihichachara obere ntutu site na iji akwa nhicha.
Kwesịrị ikpo mmanụ ahụ ntakịrị - ọ kwesịrị ịdị ọkụ na aka ma ọ bụghị ọkụ. Yabụ, tinye microwave mmanụ n'ihe dị ka sekọnd iri. Nke a na-emepe ntutu nke dị n’èzí, na-eme ka ọ dị mfe ka mmiri ahụ banye n’ime ntutu. Mgbe ịtọsịrị ntutu ahụ, were mmanụ almọnd na-ekpo ọkụ na mkpịsị aka gị kpuchie ya n'isi. Bido na ntutu isi ma buru uzo buru uzo.
Jiri mkpịsị aka okirikiri nke mkpịsị aka gị, na-etinye naanị nrụgide zuru ezu mgbe ị na-agbanye mmanụ na. Mgbe ahụ mee otu ihe ahụ site na nape ruo okpueze. Gbaa mbọ hụ na ekpuchila isi niile. Ọ na - enyere aka n'ịkpalite ntutu ọhụrụ, ịkwado mgbọrọgwụ ntutu, na ichebe ntutu
Ozugbo ekpuchie isi gị niile, jiri akwa tosh mee ihe iji nyere aka gbasaa mmanụ na ntutu gị niile, eriri ndị ahụ gụnyere. Ọ bụrụ na ị daa n'akụkụ Atụmatụ ntutu , were ole na ole tụlee mmanụ almọnd ọzọ nke etinyere aka na ndụmọdụ ahụ. Were akwa nhicha ọkụ ma kechie ya n'isi gị ruo otu awa ma ọ bụ karịa. Ozugbo ịmechara ya, jiri ncha ntutu dị nro na-asacha ya. Mee ọgwụgwọ a otu ugboro n'izu.
Mmanụ almọnd maka ụdị ntutu dị iche iche
Ọ bụrụ na ị nwere mmanu mmanu, ntutu ntutu, mgbe ahụ ị kwesịrị iji ọgwụgwọ mmanụ na-ekpo ọkụ. Gwakọta mmanụ almọnd na mmanụ aki oyibo. Kpoo nke a na microwave maka ihe dị ka 10 sekọnd ma tinye ya na ntutu na ntutu gị. Echerela ogologo oge tupu ị saa ntutu gị n'agbanyeghị. Naanị chere 10 nkeji, wee saa ntutu gị. Gwakọta ngaji abụọ ma ọ bụ atọ n'ime apụl cider mmanya n'ime iko mmiri ma jiri ya mee ihe sachaa ntutu gị . Jirizie shampoo kwesịrị ekwesị wee sachapụ mmanụ buru ibu. Usoro ọgwụgwọ a na-edozi ntutu gị ma na-edozi ya. Site na ịsacha ya ozugbo, ị ga-ahụ na mmanụ karịrị agbakọghị ma naanị ego dị mkpa ka a ga-ejigide.
Ọ bụrụ na ị nwere nkụ, ntutu frizzy, mgbe ahụ ịkwesịrị inye ntutu gị mmiri na ume protein. Mmanụ almọnd na-arụ ọrụ dị ka ihe ndozi na ntutu isi ya, mgbe aka nke ọzọ, akwa nwere ike idozi mmebi ntutu ya na ọdịnaya protein dị elu. Agbaji otu akwa n'ime ọkara iko mmanụ almọnd. Wụkọta ya ọnụ ka ọ bụrụ nke ọma. Detangle ntutu gị na ngalaba ya. Tinye mado ahụ na ntutu na ntutu - site na mgbọrọgwụ gaa na ndụmọdụ, nkebi site na ngalaba. Jide akwa nhicha gburugburu nke a, ma ọ bụ jiri okpu ịsa ahụ mee ka ntutu na mado ahụ dịrị n'otu wee chere nkeji iri anọ na ise. Ghichaa ntutu gị na ncha ntutu na-enweghị sulphate kwesịrị ekwesị. Jiri ezigbo ihe ndozi, mgbe ncha ntutu. Ozugbo ị na-ehicha ntutu gị, were ntakịrị mmanụ almọnd tinye ya na ntutu gị dị ka onye na-ahapụ ịhapụ ihe.
Nchikota ntutu bu ma obu nke na patchy - mmanu mmanu ke ufodu akụkụ nke ahịa ala isi, na akọrọ na ndị ọzọ. Ma ọ bụ na ọ bụ mmanu mmanu na mgbọrọgwụ na ọkpọọ kwupụta na nsọtụ. Maka ntutu dị otú ahụ, ịkwesịrị iji ọgwụgwọ mmanụ na-ekpo ọkụ maka ntutu isi. Tinye mmanu di oku n’isi ya ma saa ya ozigbo. Jiri apụl cider mmanya itucha, dị ka nke eji n'elu iji kpochapụ mmanụ gabigara n'isi. Tupu i jiri ncha ntutu, tee nhicha ntutu ma tinye mmanụ na-ekpo ọkụ na eriri nke ntutu isi na-ezere isi na mgbọrọgwụ nke ntutu. Debe mmanụ a maka ọkara elekere ma ọ bụ karịa, wee sachaa ntutu gị na ncha ntutu kwesịrị ekwesị.
Masks ntutu na-eji mmanụ almọnd
Enwere nkpuchi ntutu isi na jiri mmanụ almọnd . Ndị a bụ ụfọdụ ga - enyere ntutu gị aka inweta ezigbo ahụike na ederede dị nro. Gwakọta tablespoons atọ nke almọnd mmanụ na tablespoons atọ nke mmanụ castor. Tinye ụfọdụ mkpuru ahihia nke ifuru Hibiscus na ngwakọta a. Hịa aka a na isi gị na ntutu isi maka minit 10. Hapụ otu awa mgbe nke ahụ gasịrị, wee jiri ncha ntutu kwesịrị ekwesị sachaa ya.
Ihe nkpuchi ọzọ na-eji mmanụ argan, akwa, mmanụ almọnd na shea butter. Were otu nkochi ime akwa, otu ngaji mmanụ almọnd na otu ngaji nke bọta Shea. Na ngwakọta a, tinye ọkara na otu ngaji nke mmanụ argan. Ghichaa ntutu gị na mmiri ọkụ, wepụ ya. Tinye ngwakọta na ntutu. Kechie ya na akwa nhicha wee hapụ 30 ruo 40 nkeji. Jirizie shampoo na-enweghị sulphate, kpochapụ ya niile. Mee ọgwụgwọ a otu ugboro n'izu.
Were otu ngaji mmanụ almọnd tinye ya na otu ụzọ n’ụzọ anọ nke iko yoghọt na ngaji abụọ nke mmanụ a 2ụ na-achaghị acha. Whisk a ọnụ iji mepụta mado. Site na ihe eji etinye ya, tinye ya na ntutu gị, nkebi site na ngalaba dị ka nkpuchi siri ike. Hapụ nkeji 30 ruo 40 tupu ị saa ya niile site na iji ncha ntutu kwesịrị ekwesị. Towel-kpoo ntutu gị ma hapụ ya ka ọ kọọ nke ọma. Mee ọgwụgwọ a otu ugboro n'izu.
I nwekwara ike ịgụ gbasara uru ahụike nke almọnd maka nlekọta ntutu .
eserese nke kate middleton
esi zere ntutu ada n'ụlọ ịgba akwụkwọ
kedu ka anyị ga-esi gbochie ntutu ịda
uru ahụike nke kranberị ihe ọ juiceụ juiceụ
mmanụ castor mmanụ na mmanụ oliv maka ntutu
omume iji gbaa abụba afọ